Angels OR Demons Ihe Ịchọ Mma - Imewe Mmewe
Ihe Ịchọ Mma Anyị na-agba ọgụ mgbe niile n'etiti ihe ọma na ihe ọjọọ, ọchịchịrị na ìhè, ehihie na abalị, ọgba aghara na usoro, agha na udo, dike na villain kwa ụbọchị. Na agbanyeghị okpukpe ma ọ bụ mba anyị, akọọla akụkọ banyere ndị anyị na ha na-akpachi anya: mmụọ ozi nọ ọdụ na ubu aka nri anyị na mmụọ ọjọọ n'aka ekpe, mmụọ ozi ahụ mere ka anyị mee ihe ọma ma dekọba ọrụ ọma anyị. ime ihe ojoo ma dekọba ihe ọjọ anyi nile. Mmuo ozi bu ihe nlere maka "superego" anyi a ma ekwensu guzoro maka "Id" ya na agha nke di n'etiti akọnuche na ndi amaghi ama.
Aha oru ngo : Angels OR Demons, Aha ndị na-emepụta ya : Samira Mazloom, Aha onye ahịa : Samira.Mazloom Jewellery.
Ihe Ịchọ Mma Samira Mazloom Angels OR Demons